Budata Next Car Game: Wreckfest maka Windows
Budata Next Car Game: Wreckfest
Budata Next Car Game: Wreckfest,
Egwuregwu ụgbọ ala na -esote: Wreckfest bụ egwuregwu ịgba ọsọ nke na -enye anyị ụdị ihe ahụ na egwuregwu Destruction Derby kpochapụwo anyị rụrụ na gburugburu DOS na 90s.
Ebumnuche anyị kacha na mbibi Derby abụghị ịgba ọsọ, kama ọ bụ iji ụgbọ ala anyị mebie ndị na -emegide anyị nike wee chụpụ ha nọsọ site nịkụpịa ụgbọ ala ha. Nikwu ya nụzọ ọzọ, negwuregwu ahụ, nke bụ ezigbo ụdị egwuregwu bọọlụ na -anya ụgbọ mmiri na ogige ntụrụndụ, ọtụtụ ihe na -ebute ụzọ. Nke a bụ egwuregwu ụgbọ ala na -esote: Wreckfest na -ejikọ ihe a na ụgbọ ala ịgba ọsọ ma na -ewetara anyị eserese dị elu nke ukwuu na injin physics nke na -enye nkọwa zuru oke.
Na egwuregwu ụgbọ ala na -esote: Wreckfest anyị na -eji ụgbọ ala ochie na nke ochie. Ụgbọ ala ndị a, nke ị gaghị emere ebere mgbe ị na -akwada, nwere ha nokpuru ụdị dị iche iche. Na mgbakwunye na ụgbọ ala ndị America mara mma, ụgbọ ala sitere na Europe na Eshia na -eche anyị negwuregwu ahụ. Egwuregwu ụgbọ ala na -esote: Wreckfest na -enyekwa anyị ohere ịchịkọta ụgbọ ala anyị bibiri nime ebe ndọba ụgbọala anyị.
Ihe kacha nta chọrọ maka egwuregwu ụgbọ ala na -esote: Wreckfest, nke nwere ụdị ịgba ọsọ dị iche iche yana ọtụtụ mmadụ, bụ ndị a:
Sistemụ arụmọrụ Windows XP
2.4 GHZ dual core Intel processor ma ọ bụ 2.5 GHZ dual core AMD Athlon processor
Nvidia GeForce 8800 GT ma ọ bụ kaadị AMD Radeon HD 3830
2GB nke nchekwa efu
Kaadị ụda DirectX dakọtara
Next Car Game: Wreckfest Ụdịdị